Archive du 20180512
Marc Ravalomanana “Ny samy Malagasy no aoka hifandamina”
Nilaza ny fomba fijeriny ny toe-draharaha misy eto Madagasikara sady nandroso vahaolana ivoahana amin’ny krizy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Depioten’ny fanovana “Tsy ny Afrikanina no hanome lesona ny Malagasy”
Niova endrika kely, ary nihamafy hatrany ny tolom-pitakiana ny fialan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Niainga teny amin'ny Boriborintany 6 manerana an'Antananarivo ny diabe nihazo ny kianja 13 mey.
CENI Manao tsindry amin`ny fitondrana
Tsy mbola misy sori-dalana mazava hivoahan`i Madagasikara amin`ny krizy politika mitranga amin`izao fotoana.
Lalàm-pifidianana Nivoaka ny didy mampanan-kery azy
Taorian’ny fangatahana ny hevitry ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana (HCC) mba hitondrany fanazavana momba ireo antonantony sasantsasany amin’ireo fanapahana navoakany ny 3 mey lasa teo, dia navoakan’ny fiadidiana ny Repoblika omaly didy manambara fa manankery ireo lalàna fehizoro momba ny fifidianana.
Praiminisitra Solonandrasana Natahotra vahoaka dia nitsoaka
Tranga hafa kely tsy dia fahita firy no niseho teny Anosy omaly. Nitsaitsaika nivoaka ny efitrano nanatanterahana ny lanonana ara-pitsarana fametrahana ny filoha voalohan’ny fitsarana an-tampony tetsy Anosy ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Fitondrana efa milavo lefona Vonona amin’ny governemanta iraisana
Zavatra 3 lehibe no noresahin’ny CENI, dia ny fandrosoana ny fifidianana, ny fanatanterahana ny fifidianana araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana ary ny fanemorana izany.
Vahaolana amin’ny krizy Manainga ny hery velona rehetra mba hikaon-doha ny CCIS
Naneho ny heviny mikasika ny toe-draharaham-pirenena misy eto amintsika ihany koa ny Collectif des Cadres Intellectuels any amin’ny Faritra Sofia.
Vahoakan’ny Faritanin’i Toliara Namaly bontana ny mpitondra ankehitriny
Manoloana ny filazana nataon’ny mpitondra lazainy fa amoron-tevana tarihan’ny filohany Hery Rajaonarimampianina tao anaty filankevitry ny governemanta tamin’ny talata 9 mey 2018 teo, dia nandefa fanambarana famaliam-bontana izany,
Fanelanelanana iraisam-pirenena Mbola lavitr’ezaka ny asa
Nifarana ny dian’Atoa Ramtame Lamamra, iraka manokan’ny vondrona Afrikanina teto Madagasikara izay niara-niasa akaiky tamin’ireo solontenan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena.
Fivondronan’ny mpiasam-panjakana Hitolona foana na aorian’ny fifidianana aza
Nifamory tetsy amin’ny tranompokonolona Analakely omaly zoma 11 mey ireo mpikambana anatina sendika maromaro toy ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampianarana.
Kandida tsy mahazo 2% Tokony hosaziana, hoy ny FMI
Nanambara tamin’ny alalan’ny filohany, Jean Jacques Ratsietison, tetsy amin’ny Pavé Antaninarenina, omaly ny avy eo anivon’ny FMI Malagasy fa tsy manaiky ny hampandrosoana ny datim-pifidianana raha tsy voadio aloha ny lisitra.
Raharaha Houcine Arfa Toa tsy hita izay niafarany
Tsy mbola nifarana ny raharaha Houcine Arfa na somary nangingina aza tato ho ato. Maro ny ampamoaka nataon`ity gadra nitsoaka ity tamin`ny haino aman-jery frantsay,
Tsenaben’ny sakafo sy ny lakozia Hasongadina ny karazan-tsakafo avy any amin’ny faritra
Hotanterahina manomboka ny alarobia 16 mey izao etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina, haharitra efatra andro, ilay tsenaben’ny sakafo sy ny lakozia andiany fahasivy karakarain’ny ESCOMA.
Fakana ny fom-bahoaka Hivaro-bary 800Ar/kg ny fanjakana
Efa ho iray volana teo ho eo izay ny avy ao amin’ny minisiteran’ny varotra, ny minisiteran’ny mponina, ny minisiteran’ny serasera ny hivarotra vary amin’ny vidiny mora mba hitsinjovana ireo fianakaviana marefo. Atomboka eto amin’ny faritra Analamanga izy io,
Eric Fou Hehy Miantso vonjy amin’ireo olobe eto amin’ny firenena
Nanao antso avo amin’ireo namany sady efa noraisina ho tahaka ny ray aman-dreniny mba hanampy azy noho ny aretina mikiky azy i Eric Rakotoarimanana (Eric Fou Hehy).
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Ranaivoson Haja Maminiaina Ny fanarahan-dalàna sy antanatohatra no nitarika ny fahombiazany
Hiverina kely eo amin’ny taranja basket-ball Malagasy indray ny eto amin’ny pejin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy eto amin’ny gazety Tia Tanindrazana anio sabotsy 12 mey 2018. Ny mpitsara tanora iraisam-pirenena Malagasy latsaky ny 40 taona eo amin’ity taranja ity, Ranaivoson Haja Maminiaina, no vahinintsika amin’izany.
Fahagagana sisa antenaina
Tsy alohalika intsony, fa efa an-tendakely ny ranombary. Miandry fahagagana ny fanjakana eo anatrehan’ny tolom-bahoaka tarihin’ny depiote.
EPP Vohibola Nasiam-panavaozana tanteraka, nahazo “kits scolaire” ny mpianatra
Nasiam-panavaozana tanteraka ny sekoly ambaratonga fototra ao Vohibola, manamorona ny lakandranon’i Pangalana any amin’iny faritra Atsinanan’ny Nosy iny.
Sekoly ambony INSPNMAD Namoaka Paramed 321 mianadahy
Ho fanomezan-tanana ny fitondram-panjakana, indrindra ho fiarovana ny ain’ireo reny sy zaza Malagasy dia namoaka paramed miisa 321 ny sekoly ambony INSPNMAD ny alakamisy teo.
Fitsaboana maimaimpoana Nanomboka teny Andavamamba ny hetsiky ny Ahmadiyya
Fanampiana tosika ny sehatra fanondranana 500 tapitrisa euros no homen’ny vondrona eoropeanina
Omaly zoma 11 mey no natao tetsy amin’ny hotely Carlton ny latabatra boribory ara-toekarena andiany fahefatra iarahan’i Madagasikara sy ny vondrona eoropeanina.
Mozika Betsaka no mirona amin`ny fampianarana hira
Tao anatin`ny 16 taona nijoaroany, tena nahafantarana ny Cours de Clavier et de Chant Hery Andriantahina na CCHA ny fampianarana mitendry “clavier”, indrindra ny fitendrena any am-piangonana sy ny fitendrena hira ara-pilazantsara.
FITOKONANA ANY ANTSIRANANA
Tonga hatrany Antsiranana koa ny fitokonana. Fantatra fa hanomboka amin’ny alatsinainy ho avy izao ireo mpiasa no hanatontosa izany noho ny tsy fihainoana azy ireo mihitsy hatrizay.